ဝန်ဆောင်ခ (၁၀၀) ထဲနဲ့ ဘယ်လို လွယ်လွယ်ကူကူ မီတာဆောင်ကြမလဲ? | Mandalay Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Mandalay | Mandalay Yellow Pages
အခုလို ရောဂါတွေပြန့်နှံ့နေတဲ့ အချိန်မှာ မီတာဆောင်ရင် လူတန်းစီရ၊အကြွေဆောင်သွားရနဲ့ အလုပ်တွေရှုပ်နေရပြီလား?? ဒီလိုတွေမလုပ်ရပဲ အိမ်ကနေ အေးအေးဆေးဆေး မီတာဆောင်လို့ရတဲ့ နည်းကိုရော သိပြီးပြီလား??
အရင်က မီတာကို Online Payment တွေနဲ့ဆောင်လို့ရတယ်ဆိုပေမယ့် အလုပ်ရှုပ်တာတွေရယ်၊အသုံးပြုရမလွယ်ကူတာရယ်၊ဝန်ဆောင်ခကြီး မြင့်တာတွေရယ်ကြောင့် မသုံးဖြစ်ကြပါဘူး။ အဓိကကတော့ ဝန်ဆောင်ခများတာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။
အခုတော့ ဒီပြဿနာကို ဧရာဝတီဘဏ်ကနေ ဖြေရှင်းပေးလိုက်ပါပြီ။ AYA mBanking ကနေ မီတာဘေဆောင်ရင် ဝန်ဆောင်ခ (၁၀၀) သာကျသင့်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ဒီဝန်ဆောင်မှုကို ရန်ကုန်၊မန္တလေး၊နေပြည်တော်၊ဧရာဝတီ၊မကွေး၊ပဲခူး၊စစ်ကိုင်း၊မွန်၊ကရင်၊ရခိုင်၊ရှမ်း၊ကယား အစရှိတဲ့ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီး (၁၂) ခုမှာ အသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါပြီ။
ဒီဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် ဝန်ဆောင်မှုတွေ စုံလင်တဲ့ AYA mBanking 2.0 ကို အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီး AYA mBanking 1.0 မှာတော့ မီတာဘေပေးချေမှုကို အသုံးပြုလို့ မရပါဘူး။ ဒါ့အပြင် AYA mBanking 1.0 ကိုတော့ နိုဝင်ဘာလ (၂၅) ရက်အထိပဲ အသုံးပြုလို့ရမှာပါ။
AYA mBanking 2.0 ကို Google Play Store၊ Apple App Store နဲ့ Huawei AppGallery တွေမှာ အလွယ်တကူ download ရယူပြီး မိမိမှာရှိတဲ့ AYA mBanking 1.0 ရဲ့ Username နဲ့ Password အတိုင်း Login ဝင်ရုံပါပဲ။
What's New Read 132 times